မိုးပန်းချီ: ချစ်သော..ကမ္ဘာပြိုရင်တောင် မိုးထားပေးမယ့်သူ
ခင်လဲ့ဆိုတာ ‘သီး’ ရဲ့အမေ၊ ဖွားသက်ရဲ့သမီး။ အမေက အဖေ့အမေ၊ သူ့ယောက္ခမဆီက အမွေအဖြစ်ရထားတဲ့ ကြေးထည်တွေရောင်းတဲ့ဆိုင်မှာ ဦးစီးရင်း မိသားစုအတွက် တစ်ဖက်တစ်လမ်းက ဝင်ငွေရှာပေးနေတာ။ အဖေကတော့ နှစ်နှစ်၊ သုံးနှစ်နေမှ အိမ်ကိုပြန်လာနိုင်တာ။ အဲဒိလောက်ကြာရအောင်ကလည်း အဖေက သင်္ဘောသား၊ သင်္ဘောပေါ်က စာဖိုမှူးဆိုပါတော့။ အဖေမို့ တစ်ခါတလေ အိမ်မှာ ဟင်းချက်ရင် တစ်အိမ်သားလုံးလျှာလည်သွားရော။ ဝက်သားကန်စွန်း ကော်ရည်က အဖေ့ရဲ့လက်မှတ်ရဟင်းတွေထဲက တစ်ခွက်ပေါ့။
ဖွားသက်ကရှိသမျှအင်အားနဲ့ လည်ပင်းကြောကြီးတွေ ထောင်ထနေအောင် ‘သီး’ ကို အော်ပြောလိုက်ပေမယ့် အသံက ဝင်သံခပ်အစ်အစ်ကြီး။ ပြီးတော့ မျက်ရည်တွေကလည်း ဖြိုင်ဖြိုင်ကျလို့ ဘာတွေများဖြစ်ကုန်ကြပြီလဲ။ ဘာတွေဖြစ်နေတာလဲ?
ဘေးနှစ်အိမ်ကျော်က ဖုန်းနဲ့ အမေ့ကိုဖုန်းခေါ်ရင်း ဖွားသက်ငိုနေတယ်လို့ပြောတော့ အမေက ပြာပြာသလဲပဲ ပြန်လာခဲ့မယ်တဲ့…အိမ်ထဲပြန်ဝင်လာတော့ ဟိုလူနှစ်ယောက်ရှိနေသေးတယ်။ ‘သီး’ကိုလည်း အသက်မေးလား ဘာမေးလား လုပ်နေသေးတယ်။ သူတို့မျက်နှာတွေကလည်း မသာမယာနဲ့။ ‘သီး’ က ဖွားသက်ပေါင်ပေါ်မှာ တင်ထားတဲ့ ဟိုစာကိုဖတ်ချင်လို့ ဖွားသက်ကိုခွင့်တောင်းတော့ ဘာမှပြန်မပြောဘူး။ ဒါနဲ့ကိုယ့်ဘာသာ အသာလေးဆွဲယူပြီး ဖတ်ကြည့်မိတော့ ‘သီး’ရင်ဖတ်တစ်ခုလုံး အင်အားကြီးတဲ့အရာတစ်ခုနဲ့ ဆောင့်ထိုးလိုက်သလို အောင့်ပြီး အေးခဲခဲကြီးဖြစ်သွားရတယ်။ ရုတ်ချည်းဆိုသလို ဘုရားတမိရင်း….စက္ကန့်ပိုင်းအတွင်း တစ်ကိုယ်လုံး နုံးချိသွားတယ်။ ဒူးတွေတုန်နေတယ်။ မျက်လုံးကို အားကုန်မှိတ်ချလိုက်ပေမယ့် မှုန်ဝါးနေတဲ့ ဟင်းလင်းပြင်ကြီးတစ်ခုနားမှာ ‘သီး’ တစ်ယောက်တည်း တွေတွေကြီး ရပ်နေတယ်လို့ ကြောက်လန့်တကြား မြင်ယောင်လာမိတယ်။
အမေပြန်လာတော့ ဟိုလူနှစ်ယောက်မရှိတော့ဘူး။ အမေက ဖွားသက်ကိုဖက်ပြီးငိုရော။ ငိုတာမှ အူလှိုက်သည်းလှိုက်ပါပဲ။ အမေနဲ့အတူ ပြန်လာတဲ့ ‘သီး’ အထက်က အစ်မကတော့ ငိုလိုက်တာ မျက်လုံးနှစ်ဖက် လုံးပေါက်ထွက်ခါနီး ဖြစ်တော့မယ်။ ‘သီး’ ဘာလို့မျက်ရည်မကျသေးတာပါလိမ့်။ ခဏနေတော့ အမေက သူ့မောင်အငယ်တစ်ယောက်ကို ဖုန်းဆက်ခေါ်လိုက်ပြီး အမေ့ယောက်မတွေဆီကို ‘သီး’ နဲ့အဖော်လိုက်သွားပေးဖို့ ငိုသံပါကြီးနဲ့ပြောနေလေရဲ့။ ဖွားသက်ကတော့ မျက်ရည်တွေနဲ့ ထမင်းအိုးဆက်နှပ်နေလို့ ‘သီး’ လုပ်ပေးမယ်ပြောတော့ ခပ်သာသာတွန်းထုတ်လိုက်တယ်။ သူ့ဘာသာဆက်လုပ်မယ်ဆိုတဲ့ သဘော… အစ်မက လက်ဆေးဆင်နားမှာ ဒူးခေါင်းနှစ်လုံးထဲ မျက်နှာအပ်ပြီး ဆက်ငိုနေလေရဲ့။ ရင်ဘတ်တွေ အောင့်လိုက်တာ….
အမေ့ယောက်မတွေရဲ့ အိမ်ကိုရောက်တော့ သီး ရဲ့ကြက်သေသေနေတဲ့မျက်နှာကိုကြည့်ပြီး ဘာဖြစ်လာတာလဲလို့ ဝိုင်းမေးကြတယ်။
“ဒေါ်ကြီး… ဖေကြီး မရှိတော့ဘူး….”
“ဘုရား..ဟဲ့ ဘာပြောလိုက်တယ်။ ဘယ်သူပြောတာ နင့်ကိုအဲဒါ..ဟင် သီး”
“ဖေကြီးသင်္ဘောလိုက်တဲ့ ကုမ္ပဏီကလူတွေ စာနဲ့လာအကြောင်းကြားလို့”
“ဖြစ်ရလေ အစ်ကိုရယ်…ငါ့တူမလေးတွေတော့ ဖတစ်ဆိုး သမီးလေးတွေဖြစ်ကုန်ပါပြီ…”
အဒေါ်ကပြောပြောဆိုဆိုငိုရင်း ‘သီး’ ကိုအားကုန်ဖက်ထားလိုက်တော့ အသက်ရှူကြပ်သွားရတယ်။ ဒါပေမယ့် မငိုပါဘူး။ မငိုမရှိုက်ပဲ မျက်ရည်တွေက သူ့ဘာသူကျလာတာပဲ…အငိုလွယ် အရှိုက်ခက်တယ်ဆိုတာဒါမျိုးပဲနေမှာ။ ‘သီး’ မှီထားတဲ့ အဒေ့ါ်ပုခုံးစွန်း အင်္ကျီတစ်ခုလုံး ညှစ်ချလို့ရအောင်ကို ရွှဲနစ်သွားတော့တယ်။
အဖေသေပြီလို့ သတင်းရတော့ အကြီးအကျယ်တုန်လှုပ်မိတာ ဝန်ခံရမှာပါပဲ။ တစ်ခုခုကို ကြောက်တဲ့ တုန်လှုပ်မှုမျိုးကြီးနဲ့။ အဖေသေတာ ‘သီး’ ပယောဂ မကင်းဘူးလို့ ခံစားရတယ်။ အဖေ့ကို မချစ်ခဲ့ဘူး။ အဖေ့ကို သီး မုန်းတယ်။ အဲဒီအမုန်းနဲ့ ရောပြီး ကြောက်လန့်တကြား သတိရမိတာက အဖေနဲ့ပတ်သက်ပြီး သီး မလုပ်သင့်တဲ့အရာတစ်ခု လုပ်ခဲ့မိတာကိုပဲ။
‘သီး’ အသက် တစ်ဆယ့်နှစ်နှစ်လောက်မှာ အဖေပြန်လာတဲ့ တစ်ခေါက်ကို ကောင်းကောင်းမှတ်မိသေးတယ်။ အဲဒိတုန်းက အဖေ့ဧည့်သည်တွေလည်း အိမ်မှာ ရောက်နေတဲ့အချိန်ပေါ့။ ဒုတိယ အစ်မက မွေးထားတဲ့ အဖေ့မြေးဦး၊ အသည်းကျော်မလေးက အိမ်ရှေ့တံတားနားမှာ ငြိမ်ငြိမ်လေးထိုင်ဆော့နေရင်းက ရုတ်တရက်ထပြေးတယ်။ ကလေးအနားမှာရှိနေတာမို့ ဒိုင်ဗင်မထိုးရုံတမယ် ကလေးကို လှမ်းဆွဲလိုက်ပေမယ့် မီလုမီခင်လေးမှာ လွတ်ထွက်သွားတယ်။ ဒါပေမယ့် ကံကောင်းတယ်ဆိုရမယ်၊ တံတားဘေးက မြောင်းထဲကျလုကျခင်လေးမှာ ကလေးကို အချိန်မီပြန်ဆွဲလိုက်နိုင်ခဲ့တယ်။ အဖြစ်အပျက်ကမြန်လွန်းတော့ အိမ်ထဲက လူတွေရော၊ အိမ်နားကလူတွေပါမကျန် အော်သံ၊ ဟစ်သံ၊ သတိပေးသံတွေနဲ့ ပွက်လောရိုက်ကုန်တာပေါ့။ သီး ဒူးခေါင်းမှာလည်း ကလေးကို ဝမ်းလျားထိုးဖမ်းလိုက်ရလို့ အရေးပြားပေါက်ပြီး သွေးတွေနဲ့မို့ တော်တော်လန့်သွားတယ်။ ကလေးလေးလည်း ကြောက်အားလန့်အားနဲ့ အော်လိုက်တာမှ ပြောမနေပါနဲ့တော့။ အဖေချက်ချင်းအိမ်ထဲကပြေးထွက်လာပြီး သူ့မြေးမလေးကို ကောက်ချီရင်း သီးကိုအော်ထည့်လိုက်တယ်။
“ဘာလို့ ကလေးကို ကောင်းကောင်းကြည့်မထားရတာလဲ?”
“ဟာ..ဖေကြီးကလည်း သီး လည်းလှမ်းဖမ်းလိုက်တာပဲဟာကို။ အရာရာ သူ့မြေးပဲ…”
အဖေ့လက်ပြန်နဲ့ အားကုန်လွှဲရိုက်လိုက်လို့ သီးရဲ့ ဘယ်ဖက်ပါးပြင်တစ်ခုလုံး ထုံပြီးပူသွားတော့တယ်။ အဖေက စကားနဲ့လက် တစ်ထပ်တည်းကျအောင်ကို သီးအပေါ်ရက်စက်ခဲ့တာ။ အဖေ့ကို ခပ်စိမ်းစိမ်းတစ်ချက်စိုက်ကြည့်ပြီး နေရာကနေ ဒရောသောပါးပြေးထွက်၊ အိပ်ခန်းထဲရောက်တာနဲ့ အသံတစ်စက်မှမထွက်အောင် ခေါင်းအုံးမှာမျက်နှာအပ်ပြီး အော်ငိုပြစ်လိုက်တာပဲ။ အဲဒိတုန်းက ပါးကလက်ဝါးရာ အနာထက် ရင်ထဲမှာဆို့ပြီး တစ်ဆစ်ဆစ်ကျင်တက်လာတာက ပိုဆိုးတာ။
“နောက်ကိုယ့်ဒေါသကိုယ် ထိန်းပါရှင် ကိုယ့်သွေးသားမဟုတ်တာကျလို့”
“ဒီစကားမပြောနဲ့ ငါကအဖေကွ ပြောကြစတမ်းဆို ငါက ကမ္ဘာပြိုရင်တောင် မိုးထားပေးချင်တာ..”
အမေ့ဆီက ရှိုက်သံသဲ့သဲ့ ကြားလိုက်ရတယ်။ အဖေနဲ့ပြောနေတာတွေကို တိုးတစ်စ၊ ကျယ်တစ်စပဲ ကြားရပေမယ့် ဘယ်ကိစ္စအတွက် စကားအခြေအတင်ပြောနေသလဲဆို သိသာပါတယ်။ မျက်ရည်ကို လက်ဖမိုးနဲ့ ခပ်ကြမ်းကြမ်းပွတ်သုတ်ပြီး နှုတ်ခမ်းတစ်ဖက်သိသိသာသာ ကော့တက်သွားအောင် မဲ့ပြုံးပြုံးလိုက်တယ်။ မယုံပါဘူး..။ အိပ်ယာပေါ်က ထထိုင်ပြီး လှုပ်ရှားနေတဲ့စိတ်ကို ငြိမ်အောင် ဘုရားရှိခိုးဖို့ ပြင်လိုက်တယ်။ နောက်တော့ တစ်စုံတစ်ရာတွေးမိပြီး ဆုတစ်ခုတောင်းလိုက်တယ်။ အဲဒိဆုတောင်းဟာ အဖေ့ကို ကံဆိုးစေခဲ့တယ်ဆိုရင် အချိန်တွေပြန်လှည့်ပြစ်ချင်တယ်။
မျက်နှာသုတ်ပုဝါနဲ့ မျက်နှာတစ်ခုလုံးကို ပွတ်သုတ်ပြီး မှန်ရှေ့ထိုင်ရင်း အစ်မရဲ့ နှုတ်ခမ်းဆိုးဆေးကို လှမ်းအယူမှာ ကြက်တူရွေးနှုတ်သီးလို ထော်ပြီး၊ သပြေသီးမှည့်ရောင် နဲ့ သွေးစရောနေတဲ့ ယောင်ကိုင်းကိုင်း နှုတ်ခမ်းကို ကြည့်မိရင်း မျက်ရည်ထပ်မကျခင် လက်ကိုကျစ်ကျစ်ပါအောင် ဆုပ်လိုက်ရတယ်။ ပထမဆုံးအကြိမ် မလှမပ ဖူးယောင်ထော်လန်နေတဲ့ နှုတ်ခမ်းသားပေါ်မှနှုတ်ခမ်းနီ ဆိုးလိုက်တယ်။ ပြီးတော့ လွယ်အိတ်ကို ကောက်လွယ်ပြီး အိမ်ကနေထွက်လာခဲ့တယ်။ ဘယ်သွားမှာလဲ၊ ဘယ်အချိန်ပြန်လာမှာလဲလို့ မေးနေကျအမေက ကြောင့်ကြည့်ပြီးကျန်ခဲ့တယ်။ အဲဒိနေ့က ကျူရှင်မရှိခဲ့ဘူး။ ည ၈ နာရီနောက်ပိုင်း အိမ်ထဲကနေအပြင် ထွက်ခွင့်မပေးတဲ့ အဖေ့ရဲ့ ညမထွက်ရအမိန့်ကို အဲဒိနေ့က တည့်တည့်ကြီးဆန့်ကျင်တဲ့နေ့ပေါ့။ အိမ်ပြန်ရောက်တော့ ည ၁၀ နာရီ။ ထူးထူးဆန်းဆန်း အမေက ဘယ်သွားနေတာလဲလို့ မကျေမချမ်းမေးရုံကလွဲလို့ ဘာမှကြီးကြီးမားမား ပြဿနာမဖြစ်ခဲ့ဘူး။ လက်နောက်ပြစ်ပြီး မတ်မတ်ကြီး ရပ်နေတဲ့ အဖေ့ကို မမြင်ချင်ယောင်ဆောင်ပြီး အခန်းထဲတန်းဝင်ခဲ့တယ်။
တစ်ညနေလုံး ကိုယ့်ဒေါသနဲ့ကိုယ် တစ်လမ်းဝင်တစ်လမ်းထွက် လျှောက်နေခဲ့ရလို့ တစ်ကိုယ်လုံးနာပြီး ချက်ချင်းပဲအိပ်ပျော်သွားခဲ့ပေမယ့် ညလယ်မှာတော့ နိုးတစ်ဝက်အိပ်မက်ရှည်တစ်ခုမက်ခဲ့တယ်။
တစ်စုံတစ်ယောက်က ခြင်ထောင်ကိုလာလှပ်ပြီး အိပ်နေတဲ့ သီး ရဲ့နဖူးကို ခပ်ဖွဖွနမ်းလိုက်တော့ မျက်လုံးတွေပွင့်လာခဲ့တယ်။ ကြည့်လိုက်တော့ အဖေရယ်။
အဖေကပြောရင်း သီးကိုထူလိုက်ပြီး တင်းတင်းကြပ်ကြပ်ဆွဲဖက်ထားတယ်။ ဖက်ထားတဲ့ အဖေ့ကျောပြင်ကို လက်နဲ့မရဲတရဲ ထိလိုက်တာနဲ့ မျက်ရည်တွေ တရောသောပါး လိမ့်ဆင်းလာတာပါပဲ။ ဒါပေမယ့် ဖေကြီးကိုလည်း ချစ်ပါတယ်လို့ ပြန်မပြောလိုက်ဘူး။ သီး ကျောပြင်ဟာလည်း စိုစွတ်လို့၊ အဖေငိုနေတာများလား။ အလင်းတစ်ခု နဲ့ အနွေးဓါတ်ရလို့ လန့်နိုးလာတော့ အိပ်မက်ကိုတွေးပြီး တကယ်များလားလို့ မရေမရာ တွေးလိုက်မိတယ်။ သေချာတာက မခြောက်သေးတဲ့ မျက်ရည်စတစ်ချို့ရှိနေခဲ့တာရယ်၊ သီး ပုခုံးစွန်းမှာ အဖေ မုတ်ဆိတ်ရိတ်ရင်သုံးနေကျ ဆပ်ပြာမွှေးနံ့ ရနေခဲ့တာရယ်။ စိတ်ထဲမှာတော့ အဖေ့ကို မုန်းတုန်းပဲ…။
တစ်သက်တာမှာ ရင်အခုန်ဆုံး ဖြစ်ရတဲ့အချိန်ကိုပြောပါဆိုရင် အဖေရက်လည်တဲ့နေ့ပဲဖြစ်မှာပဲ။ ရက်လည်တဲ့ညမတိုင်ခင်မှာ အဖေ့သူငယ်ချင်း ဘိုးတော်လိုလို ဘာလိုလို တစ်ယောက်ကို အိပ်မက်လာပေးပြီး စကားတစ်ခွန်းတည်း ပြောသွားသတဲ့။ အဲဒိ စကားက သီးအတွက်တော့ မယုံနိုင်စရာအကောင်းဆုံးပဲ။
“မခင်..ခင်ဗျားယုံချင်မှယုံပါဗျာ..မနေ့ညက ကျွန်တော့်ကို ကိုမြင့်သိန်း အိပ်မက်လာပေးသွားတယ်။ ငူငူငိုင်ငိုင်ကြီးနဲ့ စကားတစ်ခွန်းပဲပြောသွားတာ။ အဲဒါ….”
ဘိုးတော်ရဲ့စကားမဆုံးသေးခင် အမေက အင့်ကနဲတစ်ချက်ရှိုက်လိုက်တော့ ဘိုးတော်စကားခဏရပ်လိုက်ရတယ်။ ပြီးမှ…
“သမီးအငယ်ဆုံးလေးကို သေသေချာချာဂရုစိုက်ပေးဖို့ ခင်လဲ့ကိုပြောလိုက်ပါ…လို့ပြောပြီး တစ်ခါတည်းကျောခိုင်းသွားတယ်ဗျာ”
အမေက ‘သီး’ ကို တစ်အောင့်လေး ကြောင်ကြည့်နေရာက တင်းကြပ်နေအောင် လာဖက်လိုက်ပြီး ကလေးတစ်ယောက်လို ငိုတော့တာပါပဲ။ အမေပြောဖူးတာတစ်ခုရှိတယ်။ အိမ်ထောင်တစ်ခုမှာ ယောက်ျားဆိုတာ ဘာမှန်းမသိတဲ့ အမိုးကြီးတဲ့…။ ခု..အမေ့ရဲ့ ဘာမှန်းမသိတဲ့ အမိုးကြီး ရုတ်တရက် ပျောက်သွားပြီ။ အမေရင်ကွဲမှာပဲ။ အိမ်ကလူတွေရဲ့ လျှော်ပြီး၊ ခြောက်ပြီးသား အဝတ်တွေကို စုပြီးအဖေ့ပုဆိုးနဲ့မှ လုံလုံခြုံခြုံ ထုပ်ရလောက်အောင် အမေပြောတဲ့ ဘာမှန်းမသိတဲ့ အမိုးကြီးက ခုထိအရေးပါနေပြန်သေးလားလို့ မရေမရာ တွေးမိလိုက်တယ်။ သီး ဘဝရဲ့ဖြစ်တည်မှုမှာတော့ အဖေဟာ တိတိကျကျကြီးကို အရေးပါခဲ့တာပဲလို့ တွေးမိတဲ့အခါ သီး ပါးပြင်တွေ ပူနွေးစွတ်စိုကုန်တော့တယ်။
ဒါပေမယ့် အဖေသေလို့မှ အလောင်းတောင်ပြန်မရတဲ့ အဖြစ်ကိုတော့ မခံစားနိုင်အောင် နာကျင်မိတယ်။ အဖေ့သေတဲ့ တောင်အမေရိကတိုက်ရဲ့ ကျွန်းကလေးတစ်ကျွန်းရှိတဲ့ အဝေးကြီးလိုနေရာကနေ အဖေ့ရုပ်အလောင်းကို လေယာဉ်နဲ့ပြန်သယ်ကြဖို့ကြိုးစားခဲ့ပေမယ့် တော်ရုံတန်ရုံ ရုပ်မပျက်အောင် ဆေးတွေထိုးပြီး ပြန်သယ်ကြရမှာဆိုတော့ မိသားစု လက်ထဲရောက်လာမယ့် အဖေ့အလောင်းက ကြည့်ရှုမကောင်းဖြစ်နေခဲ့ရင် ပိုပြီး စိတ်မကောင်းဖြစ်ကြရမှာဆိုပြီး ဝိုင်းပြောကြတော့ အမေ နဲ့ အဖွားက ပြန်သယ်ဖို့ လက်လျှော့လိုက်တယ်။ အဖြစ်ဆိုးလွန်းလိုက်တာများ မိသားစုကိုသံယောဇဉ်သိပ်ကြီးတဲ့ လူကြီး သေမယ့်သေတော့လည်း မိသားစုနဲ့အဝေးကြီးမှာ သေရတယ်လို့ အမေပြောပြောပြီးငိုတတ်တယ်။ မိသားစုနဲ့ မိုင်ပေါင်းများစွာဝေးတဲ့အရပ်က အဖေသေတဲ့ကျွန်းလေးမှာ တစ်ယောက်တည်းမို့ အေးခဲနေမလား၊ ဒါမှမဟုတ် ပူလောင်နေမလားလို့ အဖေ့အတွက် ထူးထူးဆန်းဆန်း ပူပန်မိသေးတာ တကယ်။ အဖေ့ကို မချစ်တာက သက်သက်၊ သနားတာက သက်သက်ပဲ။
ဒါပေမယ့် အဖေ သေဆုံးသွားပြီဆိုတာ မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ မျှော်လင့်နေသေးတယ်။ အဖေ့ရဲ့ သေဆုံးခြင်း ရက်သတ္တပတ်ပြည့်တဲ့နေ့ (ရက်လည်နေ့)ဟာ အဖေ့အလောင်းမှမပါဘဲ။ အဖေသေသွားတာကို မျက်စိနဲ့တပ်အပ်မှ မမြင်လိုက်ရပဲ။ အဖေ့ရဲ့ကြွင်းကျန်တဲ့ ရုပ်အလောင်းတောင် မြင်ခွင့်မှမရသေးပဲလေ။
အခန်းတံခါးဝနားမှာ ခပ်ပြုံးပြုံးမတ်တပ်ရပ်နေတဲ့ အဖေ့ကိုတွေ့လိုက်ရတော့ သီးမှာ နှလုံးခုန်ရပ်မတတ်ဖြစ်ရပြီ။ မယုံတစ်ဝက် ယုံတစ်ဝက်နဲ့မို့ အားကုန်ထည့်ပြီး အော်ခေါ်လိုက်တာတောင် အသံမှာ အင်အားဖျော့တော့လွန်းတယ်။ အမှောင်ထဲမှာ ဖေကြီးက တံခါးဝကိုလက်ထောက်ပြီး သီး ကို ခပ်ကိုင်းကိုင်းလေး ပြုံးကြည့်နေတယ်။ ဘယ်နားက လာမှန်းမသိတဲ့ ပြာလဲ့လဲ့မီးရောင်က အခန်းထဲကို ကျွံကျနေလို့ ဖေကြီးမျက်ဝန်းစိုစိုတွေကို လှမ်းမြင်နေရတယ်။ ရုတ်တရက်အသိဝင်လာပြီး ကုတင်ပေါ်ကနေပြေးဆင်း၊ ဖေကြီးရင်ခွင်ထဲကို အတင်းခေါင်းဝင်ပြီး မျက်နှာအပ်လိုက်တော့ မျက်ရည်တွေကျလာလိုက်တာများ။ ဘုရားသခင်..ဖေကြီးတစ်ကိုယ်လုံးအေးစက်လို့ပါလား၊ သီး မျက်နှာနဲ့ကပ်နေတဲ့ ဖေကြီးရင်ခွင် နှလုံးသားတည့်တည့်နေရာကတော့ နွေးထွေးလှချည်ရဲ့။
“ဖေကြီးကို သီးမမုန်းပါဘူး…ဘယ်တုန်းကမှ မမုန်းခဲ့ပါဘူး ဖေကြီးရဲ့..”
“ဖေကြီး သိပါတယ် သမီးလေးရယ်… မငိုရဘူး တိတ်တော့။ ဒီကိုပြန်လာရတာ ခက်ခဲတယ်သမီး သူတို့ကတော်တော်နဲ့ပေးမပြန်ဘူးလေ…”
သူတို့က? သူတို့ဆိုတာ ဘယ်သူတွေပါလိမ့်..?
“ဖေကြီးကို တစ်အိမ်လုံးကသေပြီလို့ ထင်နေကြတာ ဖေကြီးရဲ့”
“သမီးကရော..ဘယ်လိုထင်လို့လဲ? သမီး ဖေကြီးကိုချစ်တယ်ဆိုရင် ဖေကြီးက သမီးအတွက် ရှင်သန်နေတယ်လေ”
“အဲလို မပြောနဲ့။ ဖေကြီး တစ်ကယ်မသေဘူးမဟုတ်လား? ဖြေလေ။ ဖြေပါ။ ဖေကြီးသေတယ်ဆိုတဲ့ ခံစားချက်ကြီးက ခံစားလို့တကယ်မကောင်းမှန်း ခုမှသိတော့တယ်။ ဖေကြီးမသေရဘူးနော်။ ဖေကြီးပြောတော့ ကမ္ဘာပြိုရင်တောင် မိုးထားပေးဦးမှာဆို…”
အဖေက သဘောတကျရယ်နေတယ်။ ရယ်သံတော့မကြားရပဲ မျက်နှာအမူအရာကိုကြည့်ရုံနဲ့ အဖေ ရယ်နေတယ်ဆိုတာ သိနိုင်တာပေါ့။
“အရူးမလေး…။ သမီးကို ဖေကြီးစိတ်ချပါပြီ…မိဘကိုချစ်ခင်မြတ်နိုးတဲ့ သားသမီးတွေဟာ မိဘတွေမရှိတော့တဲ့တိုင်အောင် သူတို့တွေရဲ့ အမိုးအကာအောက်မှာပဲ အမြဲရှိနေတဲ့သဘောပေါ့။ ဒီတော့ဖေကြီးက သမီးလေးကို အန္တရာယ်တွေအမျိုးမျိုးကနေ မိုးကာပေးထားပြီးသားဖြစ်နေပြီလေ… သမီးရဲ့”
“ဟင့်အင်း…မသွားပါနဲ့ဖေကြီးရယ်…” ဖေကြီးက ပြုံးနေတယ်။ နှုတ်ခမ်းအစွန်းတစ်ဖက် မသိမသာတွန့်သွားပြီး မဲ့သယောင်ယောင်လေးတောင်ဖြစ်သွားတယ်။ ဒါပေမယ့် ဖေကြီး ပြုံးနေတာပါ။
အားကိုးတကြီး မော့ကြည့်နေတဲ့သီး မျက်လုံးတွေမှာ ချက်ချင်းပဲ မျက်ရည်တွေ စိမ့်အိုင်လာကြပြန်တယ်။ မျက်ရည်တွေကြောင့် အမြင်အာရုံတွေ ဝေဝါးလွန်းလို့ ငုံ့မိုးကြည့်နေတဲ့ ဖေကြီးရဲ့ပြုံးယောင်ယောင်မျက်နှာဟာ တဖြည်းဖြည်း ဝေးရာကိုလွင့်ပြီး ဖျော့တော့မှေးမှိန်လာနေတယ်။ ထွက်မသွားပါနဲ့ဦး ဖေကြီးရေ…။ မျက်ရည်တွေကို လက်ခုံနဲ့ပွတ်သုတ်လိုက်မိချိန်မှာ ခေါင်းအုံးတစ်ခုလုံး အေးစက်စိုစွတ်လို့နေလေရဲ့။
“ဖွား….သီး ဆုတောင်းမှားခဲ့တယ်ထင်တယ်..အဲဒါကြောင့် ဖေကြီးသေရတာ… ဒီလို ရိုက်တတ်တဲ့အဖေမျိုးနဲ့ အတူတူ မနေပါရစေနဲ့လို့ သီး ဆုတောင်း…….”
စကားလုံးတွေ အဆုံးမသတ်ဘဲ လည်ချောင်းထဲမှာ တစ်နေတယ်။ ဖွားသက်က ပါးစပ်ကလေးဟလို့ သနားကရုဏာသက်တဲ့ အကြည့်မျိုးနဲ့ သီး ကိုငေးကြည့်နေခဲ့ရင်းက ဒါဟာတိုက်ဆိုင်မှုတစ်ခုပဲတဲ့၊ ညည်းအဖိုးဟာ ညည်းကိုမွေးပြီးနောက်နေ့မှာ သေသွားတာဟာ ညည်းကိုမွေးလို့ သူသေရတာမဟုတ်ဘူးတဲ့၊ သေတဲ့လူက သေနေ့စေ့လို့သေတာတဲ့၊ သူ့ဘဝအကျိုးပေးနဲ့ သူ့အချိန်တန်လို့ သွားရတာတဲ့၊ အဖေနဲ့ နောက်နှစ်ပေါင်းများစွာ နေချင်ပါသေးတယ်လို့ ညည်း ဆုတောင်းရင်လည်း ပြည့်ချင်မှပြည့်မှာတဲ့၊ အဲဒါကိုက ဘဝပဲတဲ့။ အဖေ့ကို သီးမှ မချစ်ပဲလို့ ပြောတော့ ဖွားသက်က ဘာမှပြန်မပြောဘဲ ခပ်ပြုံးပြုံးနဲ့စိုက်ကြည့်တာများ တစ်ခုခုကို သိနေသလိုပဲ။ ညည်း နောက်နှစ်တွေကျရင် ဖွားကို အဲဒိစကားအတိုင်းပြောဖြစ်အောင် လာပြောဦးလို့ ဆိုလိုက်သေးတယ်။
အဖေမရှိတော့တဲ့နောက်ပိုင်းမှာ အသက်နှစ်ဆယ်လောက်ကျင်လည်ကြီးပြင်းခဲ့ရတဲ့ အရပ်နဲ့ မိုင်းပေါင်းများစွာဝေးကွာတဲ့ နေရာမှာ ရေကြည်ရှာဖို့ အခြေအနေနဲ့ အချိန်အခါက တွန်းပို့ခဲ့တာ။ အဖေ့ပြာအိုးကို မြေမြှုပ်ထားတဲ့ တောင်အမေရိကရဲ့ ကျွန်းကလေးနဲ့ နည်းနည်းတော့ ပိုနီးတဲ့ အရပ်ပေါ့။ အဲဒိကျွန်းကလေးမှာလာပြီး တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင် ဘဝကိုအဆုံးသတ်ရတဲ့လူတွေရဲ့ ဓါတ်ပုံတွေကို တစ်သီးတစ်သန့်ဘောင်ထဲထည့်ပြီး ချိတ်ဆွဲထားတဲ့ အထင်ကရ နေရာလေးတစ်ခုလုပ်ပေးထားတယ်လို့ဆိုတယ်။
အဖေရှိတုန်းကတော့ အဖေ့အနားတောင် မကပ်ချင်တဲ့ ‘မြတ်ပန်းသီး’ တစ်ယောက် အဖေ့အငွေ့အသက်တွေရှိတဲ့အရပ်ကို မရောက်ရောက်အောင်သွားဖို့ ဆုံးဖြတ်ချက်ခိုင်မာခဲ့ပြီ။ အဖေသာသိရင် ဝမ်းသာမှာလား၊ ဝမ်းနည်းမှာလား မသိဘူး။ အရင်တုန်းက အဖေ့ကိုမုန်းတယ်။ ခုလည်းမုန်းတယ်။ ခုမုန်းတဲ့အမုန်းက အရင်ကနဲ့ အရောင်မတူတော့တဲ့၊ အဖေမရှိတော့တဲ့အဖြစ်ကိုမုန်းတဲ့ အမုန်းမျိုး။ အဖေ့ကို အသက်ဆက်ရှိနေစေချင်သေးတာ။ အရင်ကလို အဖေရဲ့ အသံဖြစ်ဖြစ်၊ အပြုအမူတစ်ခုခုဖြစ်ဖြစ်၊ ဆဲတာဆိုတာ၊ ဆူတာပူတာဖြစ်ဖြစ်၊ တယုတယ ချစ်ချစ်ခင်ခင် ရှိခဲ့တာဖြစ်ဖြစ်၊ ပါးကိုလက်ပြန်နဲ့ရိုက်ပြီး ဆုံးမတာဖြစ်ဖြစ် တစ်ခုခု၊ အဲဒိထဲက တစ်ခုခုကို ပြန်ရချင်မိတယ်။ သီးကို ရူးနေတယ်လို့ ဆိုချင်ဆိုတော့။
အဲဒီအရပ်မှာ အဖေ့ဓါတ်ပုံကို တွေ့ရရင် အိပ်မက်ထဲကလို မေးကြည့်ချင်သေးတယ်။ ဖေကြီး ပြောတော့ ကမ္ဘာပြိုရင်တောင် မိုးထားပေးဦးမှာဆို… လို့။ အဲဒီအခါ အဖေဘာပြန်ဖြေမှာလဲ? အိပ်မက်ထဲကလိုပဲ ပြန်ဖြေသံမျိုးကြားရရင်တော့ ဒီတစ်ခါ မငိုတော့ပါဘူး။
ဒီပို့စ်အောက်မှာ ဘာမှမရေးတော့ဘူးလို့ ဆုံးဖြတ်ထားပေမယ့် ပို့စ်နဲ့ပတ်သက်ပြီး ကျေးဇူးတင်ရမယ့်သူတွေကို ကျေးဇူးတင်စကားပြောချင်လို့ စာနည်းနည်းရေးချင်ပါတယ်။ ဒီပို့စ်ကို နိုင်ဝင်ဘာ ၁၄ ရက်နေ့၊ အဖေနဲ့အပြီးတိုင် ဝေးကွာခဲ့တဲ့ ၁၄နှစ်ပြည့် နှစ်ပတ်လည်နေ့မှာတင်ဖို့ပါ။ ရေးပြီးပြီးချင်း အကြမ်းထည်ကြီးကို ခင်မင်လေးစားရတဲ့ ဘလေ့ာဂ်ဂါ အစ်ကိုတစ်ယောက်ကို ပေးဖတ်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ နောက်ရက်အနည်းငယ်အကြာမှာတော့ ဘလော့ဂ်ဂါအစ်မတစ်ယောက်ကိုလည်း ပေးဖတ်ဖြစ်ခဲ့တယ်။
အံ့သြစရာကောင်းတာက ပေးဖတ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ အစ်ကိုနဲ့ အစ်မရဲ့ ဝေဖန်အကြံပြုချက်တွေက တိုက်ဆိုင်စွာပဲ တစ်ထပ်တည်းကျနေခဲ့လို့ စာကိုပြင်သင့်တာပြင်၊ ဖြုတ်သင့်တာဖြုတ် စတဲ့လိုအပ်တာတွေလုပ်ရပါတော့တယ်။ စာချောအောင် ပြင်ဆင်မယ်ကြံတဲ့အခါ ရင်ထဲဖြစ်လာတဲ့အခံစားချက်ကို လက်ကမလိုက်နိုင်တာကြောင့် ရေးလက်စကို ပြန်မပြင်ပဲပစ်ထားခဲ့တာ ဒီနေ့မနက်ကအထိပါပဲ။ နှစ်ဟောင်းက လွမ်းလက်စကိုချရေးမှသက်သာမှာမို့ ခုနလေးတင်ကမှ ချရေးရင်းအဆုံးသတ်ရပါတော့တယ်။ ပြင်ဆင်ထားပေမယ့် စိတ်တိုင်းတော့ကျလှရယ်တယ် မဟုတ်ပါဘူး။ သည်းခံပြီး၊ ဖြည့်စွက်ပြီး ဖတ်ပေးသွားပါဦးရှင်။ ခင်မင်ရင်းစွဲစိတ်နဲ့ အရှိအတိုင်းဝေဖန်ပေးခဲ့ကြတဲ့ အစ်ကို နဲ့ အစ်မကို လှိုက်လှိုက်လှဲလှဲကျေးဇူးတင်မိကြောင်း ဒီမှာပဲပြောချင်ပါတယ်။
အားလုံးပဲ ကျန်းမာ၊ ချမ်းသာ ဘေးရန်ကွာပါစေကြောင်း၊ ပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့ပါစေကြောင်း နဲ့ နောက်ထပ် နှစ်သစ်တစ်နှစ်ကို လူသားဆန်စွာ ဆက်လက်ကြံ့ကြံ့ခံနိုင်ဖို့ အားအင်သစ်တွေစိုက်ထုတ်နိုင်ကြပါစေကြောင်း ဆုမွန်ကောင်းတောင်းလိုက်ပါတယ်ရှင်။
ရေးသူ -- ပန်းချီ at 11:58 PM
ရိုးမြေကျ January 01, 2013 2:13 PM
ကမ္ဘာပြိုရင်တောင်မိုးထားပေးမယ့်သူက မိဘတွေဆိုတာ ညီမလေးလဲ နားလည်လာပြီ။
ပန်းချီ January 02, 2013 12:22 PM
အမှန်ပါပဲ ညီမလေး ရိုးမြေကျရေး) စာလာဖတ်တာ ကျေးဇူးပါ။
mstint January 01, 2013 4:24 PM
သား သမီးတွေအတွက် လိမ္မာရေးခြားရှိဘို့ မိခင်လိုအပ်သလို
ရှေ့ကနေ မားမာမတ်မတ်ရပ်တည်နိုင်ဘို့ ဖခင်လည်းလိုအပ်တာပေါ့ မိုးရေ။
မိဘနဲ့ နှစ်ပေါင်းများစွာ အတူတကွနေရတဲ့တန်ဘိုးကို အတူနေစဉ်မှာ အမှတ်တမဲ့ဖြစ်တတ်ကြတယ်။
အဖေနဲ့သမီးကြားမှာ အခန့်မသင့်မှုလေးဖြစ်ပေါ်ခဲ့ရတဲ့ 'သီး'ရဲ့ ရင်တွင်းခံစားချက်လေးကို နားလည်ပါတယ်။
စာရေးကောင်းတယ် အကြောင်းအရာ ပီပြင်ပေါ်လွင်စေတယ်။
mstint January 01, 2013 4:30 PM
အခုနက ရေးတင်လိုက်တဲ့ ကွန်မန့်လေး ပျောက်သွားတယ် မိုးရေ။
သားသမီးတွေ လိမ္မာရေးခြားရှိစေဘို့ မိခင်လိုအပ်သလို
ရှေ့ကနေ မားမားမတ်မတ် ရပ်တည်ပေးဘို့ ဖခင်လည်းလိုအပ်တာပေါ့နော်။
'သီး' ရဲ့ ရင်တွင်းခံစားချက်လေးကို နားလည်ခံစားမိပါတယ်။
ပန်းချီ January 02, 2013 12:27 PM
တီတင့်ပေးသွားတဲ့ ပထမကောမန့်က ကျွန်မရင်ဘတ်ကို တည့်တည့်ထိပါတယ်။ ခံစားနားလည်ပြီး ဖတ်ပေးသွားတဲ့ တီ့ကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်း) ကောမန့်တွေက spam ထဲရောက်နေတာ တီရေ။ နှစ်ခုစလုံးတင်လိုက်ပါတယ်း)) တီတင့်လဲ နှစ်သစ်မှာ ရွှင်လန်းချမ်းမြေ့ပါစေရှင်။
မိုးငွေ့........ January 03, 2013 7:00 PM
ဒီပို့စ်လေးကိုဖတ်ပြီး လွန်ခဲ့တဲ့နှစ့်ဆယ့်လေးနှစ်လောက်ကဆုံးပါးသွားတဲ့ အဖေကိုသတိရလွမ်းဆွတ်မိသွားတယ်...။
ပန်းချီ January 04, 2013 10:54 PM
မိုးနတ်ကြယ်စင် January 03, 2013 9:55 PM
ပန်းချီ January 04, 2013 11:06 PM
ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ညီမငယ်မိုးနတ်ရေး)
စံပယ်ချို January 04, 2013 2:35 PM
မိဘတွေကတော့ ကိုယ့်တွေကို ကာကွယ်နေဆဲပေါ့
ပန်းချီ January 04, 2013 10:59 PM
ဒီပို့စ်ရေးပြီးမှ ငလျင်လှုပ်တုန်းက ရင်သွေးငယ်ကိုအပေါ်ကနေအုပ်မိုးထားပြီး အသက်ကယ်ခဲ့လို့ ကိုယ့်အသက်ဆုံးရှုံးသွားရှာတဲ့ မိခင်အဖြစ်ကို သတိရမိတယ် အစ်မစံပယ်ရေ။
Anonymous January 04, 2013 9:23 PM
" ကမ္ဘာပြိုရင်တောင် မိုးထားပေးအုံးမှာ "
ဖတ်လိုက်ရတာ ရင်ထဲ တကယ် မကောင်းဘူး ..
နှစ်သစ်မှာ ပျော်ရွှင်နိုင်ပါစေ ...
ပန်းချီ January 04, 2013 11:01 PM
ခံစားဖတ်ရှုပေးသွားတာ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ညီမဆောင်းနှင်းရွက်။ ထပ်တူဖြစ်ပါစေရှင်း)
san htun January 07, 2013 4:39 AM
ဖတ်ရတာ ရင်ထဲထိလိုက်တာ မမိုးရေ..မင်္ဂလာရှိသော နှစ်သစ် ဖြစ်ပါစေ..သက်တမျှလေးတောင် တော်တော်ထွားလာတယ်..
သဒ္ဓါလှိုင်း January 07, 2013 2:22 PM
မိဘမရှိတော့ပေမယ့်လည်း မိဘရဲ့စကားလေးတစ်ခွန်းတောင် ရင်ထဲမှာ စွဲနစ်ပြီး ခံစားရပြန်တယ်.
တုနှိုင်းလို့မမီတဲ့ မိဘမေတ္တာတွေပေါ့ မိုးရယ်.. ဖတ်ပြီး ခံစားရပါတယ်...
နှစ်သစ်မှာ စိတ်ချမ်းသာ၊ ကိုယ်ကျန်းမာပြီး ကောင်းကျိုးလိုအင်ဆန္ဒများ ပြည့်ဝပါစေ..။
ပန်းချီ January 08, 2013 11:09 PM
မင်္ဂလာရှိသောနှစ်သစ်ဖြစ်ပါစေ ညီမလေး စန်းထွန်းရေ။ ဟုတ်ပါ့ သက်တမျှ အရပ်က နှစ်နှစ်ခွဲတည်းနဲ့ ကိုယ့်ခါးနားရောက်နေပြီ.. ကိုယ်တော့ဂျပုဖြစ်ကျန်ခဲ့မှာ မြင်ယောင်သေး ညီမလေးရေး))
မဒါပေးတဲ့ ဆုများနဲ့ပြည့်စုံပါရစေ မရေ။ မဒါလဲ ထပ်တူထပ်မျှ အေးချမ်းပါစေရှင်။ ညီမစာကို ခံစားဖတ်ရှုပေးသွားတဲ့အတွက်လည်း ကျေးဇူးတင်ပါတယ် မး)
ချော (အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်) January 15, 2013 2:41 AM
အိမ်မှာ အဖေက အသက် ၈၀ကျော်ပြီလေ.. ဘာမှ လုပ်နိုင်ကိုင်နိုင်မဟုတ်တော့ဘူး ဒါပေမဲ့ အိမ်မှာရှိနေပေးရုံနဲ့တင် အ်ိမ်ကြီးတစ်ခုလုံးဟာ လုံခြုံတဲ့အမိုးအကာအောက်မှာ ရှိနေသလိုကို ခံစားရတယ်
အဖေမရှိတော့ရင်ဆိုတဲ့ အတွေးက တွေးမိတာနဲ့တင် ရင်ထဲဆို့နင့်လာတယ်
ဘာဘဲပြောပြော အခုအရွယ်ထိ အဖေရှိနေပေးတာကိုဘဲ ကျေးဇူးတင်နေရပါတယ်
ဒီဝတ္ထုလေးဖတ်ပြီး အဖေ့ကိုပိုသတိရသွားတယ် ..
ပန်းချီ January 19, 2013 12:14 PM
အစ်မချောက ကံကောင်းလိုက်တာ။ ဟုတ်တယ် မ ရေ။ အဖေဆိုတာ အိမ်အမိုးအကာ တစ်ခုပါပဲ။ ကျွန်မအဖေကို ရှိစေချင်မိသေးတယ်။ စာလာဖတ်အားပေးသွားတာ ကျေးဇူးပါ မ။
ဇွန်မိုးစက် January 25, 2013 11:31 PM
ညီမရေ... ခုမှ လာဖတ်ဖြစ်တယ်။ ဖတ်လို့ကောင်းလိုက်တာ။ ဖတ်နေရင်း စိတ်မကောင်းလည်း ဖြစ်တယ်။ မိဘနဲ့သားသမီးကြားက မေတ္တာတရားဟာ ဘယ်တော့မှ မှေးမှိန်ပျောက်ကွယ်သွားရိုး ထုံးစံမရှိပါဘူးကွယ်။
ပျော်ရွှင်အဆင်ပြေသော အားလပ်ရက်များ ဖြစ်ပါစေနော်။း)
ပန်းချီ January 26, 2013 7:15 PM
ကျေးဇူးတင်ပါတယ် မဇွန်ရေ။ မဇွန်ပြောတာ သိပ်မှန်ပါတယ်။ ခုထိလွမ်းတုန်း။ မဇွန်လည်း အမြဲပျော်ရွှင်အေးချမ်းပါစေး)
Anonymous January 26, 2013 5:13 PM
ဖတ်ရင်းနဲ့ .......အပိုဒ် (၃) ကစလို့ တို့မျက်လုံးထဲကို ပိုးကောင်လေးတစ်ကောင်ဝင်ရောက်လာခဲ့လို့ အမြင်အာရုံတွေဝေဝါးလာလိုက်တာ laptop ပေါ်တင်ထားတဲ့ လက်ဖမိုးပေါ်ကိုပူနွေးတဲ့အတွေ့အထိလေးကိုခံစားလိုက်ရတော့မှ တို့သတိပြန်ဝင်လာခဲ့တယ်။ :'( တကယ်ကို ရင်ထဲမှာဆို့နင့်ကြေကွဲစွာနဲ့ ရင်နှင့်အမျှခံစားပြီးဖတ်သွားပါတယ် AM ရေ ။ :(( ဘဝဆက်တိုင်း ပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့တဲ့မိသားစုဘဝတွေကို သံသယတွေ အမုန်းတွေကင်းစွာ တည်ဆောက်နိုင်ပါစေလို့။ အရေးအသားလေးညက်လွန်းလို့အစမှအဆုံး မျောပါသွားတယ်ကွယ် ။ အမြဲအားပေး နေမယ့်.....JMO
ပန်းချီ January 26, 2013 7:19 PM
JJ ရေ…ပိုးကောင်လေးဝင်သွားတယ်ဆိုလို့ ပြုံးမိရတယ်။ ရင်နှင့်အမျှ သေချာခံစားဖတ်ရှုပေးသွားတဲ့အတွက်ရော၊ အမြဲအားပေးနေမယ့်အတွက်ရော ကျေးဇူးအပုံကြီးး)) ပေးတဲ့ဆုနဲ့လည်း ပြည့်ပါရစေ JJ…
ချစ်သော MM ;)